Celeste Trade dia solontenan'ny YALIS solontenan'ny tsenan'i Ukraine. Miatrika mpivarotra enta-mavesatra eo an-toerana sy mpivarotra ambongadiny ary mpanamboatra varavarana izy ireo. Nanomboka ny taona 2017 ka hatramin'ny 2019, niaraka tamin'ny fiaraha-miasa tsy azo sarahina, dia nanomboka nandefa ny fampiroboroboana ny marika tany Ukraine izahay.
Anyhotel Vietnam Joint Stock Company dia solontenan'ny YALIS iray hafa eo amin'ny tsenan'i Vietnam. Manana orinasan-tsoratry ny vavahady ambany 8 any Vietnam izy ireo, izay niatrika ny mpamorona trano ho an'ny fananganana. Nanomboka niara-niasa izahay nanomboka tamin'ny taona 2014. Amin'izao fotoana izao, YALIS dia nanangana sary azo antoka sy mahasoa izay nifaninana tamin'i Hafele, Yale, ary Imuntex.
BHM no solontenanay eo amin'ny tsenan'i Singapore. Manana laza malaza izy ireo izay manome ny fitaovan'ny maritrano ho an'ny mpamorona trano. YALIS dia manomboka mampiroborobo ny marika eto Singapour amin'ny taona 2019.
Tsenan'i Korea atsimo
Ny mpaninjara Koreana Tatsimo an'ny marika YALIS, Joil ART dia mpizara ao Korea Atsimo ho an'ny marika eropeana sasany. Manomboka ny fiaraha-miasa amin'ny marika YALIS amin'ny taona 2019 ary handray anjara amin'ny 2020 KOREABUILD amin'ny volana Jolay eo ambanin'ny marika YALIS.
Tsenan'i Saudi Arabia
Any Taif, tanàna andrefana akaikin'i Jeddah. Co. Door dia mifantoka amin'ny akora fananganana toy ny kitapo varavarana, hidin-trano maranitra, fivarotana varavarana, fitoeran-kabine any Arabia Saodita. YALIS dia niara-niasa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Co. Door nanomboka tamin'ny taona 2019.
UAB Romida dia nifantoka tamin'ny hidin-trano, tanany, savily ary varotra varotra sy fivarotana enta-mavesatra hafa nandritra ny 20 taona mahery, tsy tany Lithuania ihany, fa hatramin'ny any ivelany koa. Manitatra hatrany ny vokatra maro karazana. YALIS sy ROMIDA dia nanomboka ny fiaraha-miasa tamin'ny taona 2019, ary ROMIDA no lasa mpaninjara marika an'ny YALIS any Litoania.